Momba anay - Dongguan Tuoyuan Precision Machinary Co. LTD
Home > Momba ANAY >
Dongguan Tuoyuan Precision Machines Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2016 ary nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001. Hatramin'ny 2016, niditra tamin'ny serivisy fanamboarana tokana izy (fantsom-bozaka, fanamboarana vy, fanefofana ary fanodinana CNC).
Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 5000 metatra toradroa, misy renivohitra voasoratra anarana 10 tapitrisa yuan ary mpiasa 60 manontolo. Ny atrikasa voalohany dia ao amin'ny No. 101, Taixin Road East, Xinguyong Community, Distrikan'i Wanjiang, Tanànan'i Dongguan. Izy io dia mirotsaka amin'ny fanodinana sy fanangonana ny ampahany mazava tsara amin'ny fitaovana automatique tsy manara-penitra, ary koa ny famolavolana sy ny famokarana clamping.
Ny atrikasa faharoa dia ao amin'ny Village Xiaohe, Tanànan'i Daojiao, Tanànan'i Dongguan. Izy io dia manodina indrindra ny farafaran'ny milina fanapahana laser, takelaka lehibe misy fitaovana lehibe, takelaka hazavana, takelaka misy rindrina ary rindrina, mankaleo, manodina ary manodina, sns. Misy mpiasa 45 mpamokatra, 6 mpitantana, injeniera 5 ary 4 mpanara-maso kalitao.
Ny fitaovana lehibe indrindra dia ny ivon-toeran'ny milina CNC: ny fihodinan'ny CNC, ny fihodinana, ny fikosoham-bary, ny fikosoham-bary, sns.